तपाँइले लामो समय कम्युटरमा काम गर्नुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् तपाँइलाई हुनसक्छ कार्पल टनल सिन्ड्रोम | Safal Khabar
तपाँइले लामो समय कम्युटरमा काम गर्नुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् तपाँइलाई हुनसक्छ कार्पल टनल सिन्ड्रोम
शनिबार, १५ फागुन २०७७, १२ : १०
काठमाडौं । लामो समयसम्म कम्युटरमा बसेर काम गर्दा सामान्यताः हात, कम्मरमा समस्या आउँछ । निरन्तर कम्युटरमा काम गर्दा धेरै कम्युटर स्क्रिनमा हेर्ने गर्दा आँखा, हड्डी र शरीरका मांशपेशीमा पनि समस्या पुग्छ ।
हात र नाडीमा हुने दुखाई अर्थात कार्पल टनल सिन्ड्रोम (carpal tunnel syndrome) भएमा औषधि खानुपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । कार्पल टनल हड्डी र नाडीमा हुने समस्या हो । यो औंलाहरु, माझी औंला र चौँथो औंलासँग जोडिएको हुन्छ । यसमा औंलाहरु सुन्निने, कमजोरी हुने, झन्झनाउने गर्छ । यसले गर्दा हातले काम गर्न निकै गाह्रो हुन्छ ।
#कार्पल टनल सिन्ड्रोम